ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော သေနတ်ပြပွဲက ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
ရီယတ်၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဆော်ဒီ နိုင်ငံတကာ သိမ်းငှက်များနှင့် အမဲလိုက်ခြင်းပြပွဲအား ရီယတ်မြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ဧည့်သည်များဝယ်ယူနိုင်မည့် အမဲလိုက်ရာတွင် အသုံးပြုသောလက်နက်များထုတ်လုပ်သော ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးများက ပြပွဲကို ဦးစီးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ဝယ်သူများကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်နက်လိုင်စင် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ရီယတ်မြို့ မြောက်ပိုင်း Mulham ရှိ ဆော်ဒီသိမ်းငှက်ကလပ်ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ဆော်ဒီ နိုင်ငံတကာ သိမ်းငှက်များနှင့် အမဲလိုက်ခြင်းပြပွဲ၌ သေနတ်များ ကြည့်ရှုနေသူများအား အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထို့ပြင် ဧည့်သည်များအနေဖြင့် လက်နက်များနှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပြီး လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် လက်နက်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ရန်လိုအပ်ချက်များ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ရီယတ်မြို့ မြောက်ပိုင်း Mulham ရှိ ဆော်ဒီသိမ်းငှက်ကလပ်ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ဆော်ဒီ နိုင်ငံတကာ သိမ်းငှက်များနှင့် အမဲလိုက်ခြင်းပြပွဲ၌ သေနတ်များကြည့်ရှုနေသည့် ို ဧည့်သည်များအား အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ရီယတ်မြို့ မြောက်ပိုင်း Mulham ရှိ ဆော်ဒီသိမ်းငှက်ကလပ်ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ဆော်ဒီ နိုင်ငံတကာ သိမ်းငှက်များနှင့် အမဲလိုက်ခြင်းပြပွဲ၌ ပြောင်းချောသေနတ်ကို ကိုင်တွယ်ကြည့်ရှုနေသူတစ်ဦးအား အောက်တိုဘာ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အမဲလိုက်လက်နက်များ ထုတ်လုပ်သော ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည် ပြပွဲတွင် ဝင်ရောက်ပြသခြင်း၊ ပစ္စတိုများ၊ စနိုက်ပါလက်နက်များ၊ ပြောင်းချောသေနတ်များ၊ အမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်များ၊ semi-automatic ရိုင်ဖယ်များအပြင် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် အမဲလိုက်ခြင်း၊ သိမ်းငှက်နှင့် ဆက်စပ်သော ကိရိယာများ ရရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Mideast in Pictures: Gun exhibition in Saudi Arabia attracts visitors
RIYADH, Oct.6(Xinhua) — The Saudi International Falcons and Hunting Exhibition, which kicked off on Oct. 1 in Riyadh, will run until Oct. 10.
The exhibition hosts major local and international companies specialized in the manufacture of hunting weapons, which will be offered for sale for visitors, provided that the buyer obtainsalicense for weapons from the Ministry of Interior.
Moreover, the visitors can also buy weapons and ammunition, and apply foralicense to carry or acquireaweapon license.
Leading hunting weapons manufacturing companies are participating in the exhibition, offering pistols, sniper weapons, shotguns, hunting rifles, semi-automatic rifles, as well as the best products and equipment pertinent to hunting and falconry.
1-2 -Visitors look at guns during the Saudi International Falcons and Hunting Exhibition at the headquarters of the Saudi Falcon Club in Mulham, north of Riyadh, Saudi Arabia, on Oct. 5, 2021. (Xinhua/Wang Haizhou)
3- Photo taken on Oct. 5, 2021 showsavisitor handledapistol for trying at the hunting exhibition, in the headquarters of the Saudi Falcon Club in Mulham, north of Riyadh, Saudi Arabia. (Xinhua/Wang Haizhou)
4 -Photo taken on Oct. 5, 2021 showsaSaudi visitor handledashotgun for trying at the hunting exhibition, in the headquarters of the Saudi Falcon Club in Mulham, north of Riyadh, Saudi Arabia. (Xinhua/Wang Haizhou)
5- Photo taken on Oct. 5, 2021 shows Saudi visitors picked guns at the hunting exhibition, in the headquarters of the Saudi Falcon Club in Mulham, north of Riyadh, Saudi Arabia. (Xinhua/Wang Haizhou)■
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက ပြစ်မှုထင်ရှား အကျဉ်းသား ၈၁ ဦးအား ကွပ်မျက်
“Huawei က ၎င်း၏ အကြီးဆုံး နိုင်ငံခြားအရောင်းပြခန်းကု ရီယာ့ဒ်မြို့ ၌ ဖွင့်လှစ်”